Dhageyso+Akhriso+Daawo Tajumada Filimka “Boorri Mu’miniinta”Qeybta 2aad. – Bogga Calamada.com
Dhageyso+Akhriso+Daawo Tajumada Filimka “Boorri Mu’miniinta”Qeybta 2aad.
July 12, 2017 6:47 pm Views: 405
Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay qeybtii 2aad ee silsiladda Boorri Mu’miniinta oo ah muuqaallo taxane ah oo xambaarsan fariimo ku socda Muslimiinta bariga Africa.
Xalqadan waxaa ka soo muuqanaya Qaa’idka Meydaaniga ah ee lagu magacaabo Yaasir, kaas oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka soo haajirtay Kenya, ee yimid Saaxaadka Jihaadka Soomaaliya, ka tababartay, ka dagaalamay dhulkeeda, ugu dambeyntiina ku shahiiday gudaha Kenya isagoo qeyb-qaadanaya dagaalka balaaran ee lagu soo celinayo dhulalka Muslimiinta ee ku hoosjira gumeysiga Kenya.
Yaasir ayaa Shahiiday ka dib markii uu xaqiijiyey rajadiisii ahayd in mar un dhimbilaha dagaalka la gaarsiiyo deegaanada Muslimiinta ee gudaha Kenya, Wuxuuna Allaah ku sharfay shahaado ka dib markii uu gacmihiisa ku gumaaday gaallo badan.
Halkan Ka Dhageyso Tarjumada Filimka.
Hoos Akhri Tarjmada Soomaaliga ee Kalimadda Yaasir.
Walaalaheyga Qaaliga ahow, ugu horeyn waxaan naftiina iyo nafteydaba kula dardaarmayaa cabsida Allaah subxaanahu Watacaalaa.
Intaas ka dib, Walaalaheyga ku dhaqan Mombasa, Nairobi, Garissa, Dare-s-Salaam, Zanzibar, iyo Iringa. Walaalaheyga ka soo jeeda Kampala, Jinja iyo Tororo iyo dhamaan walaalaheyga Muslimiinta ah ee fahamaya Luuqaddan meelwaliba oo ay joogaanba, Waxaan idiin xusuusinayaa Hadalka Allaah marka uu leeyahay:
Sidoo kale Allaah Wuxuu Leeyahay:
Marka sidaas darteed kaalaya aan la dagaalano Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Itoobiyaanka, Yugaandheeska, iyo Kenyaatiga si la mid ah sida ay noola dagaalamayaan iyagoo wadajir ah.
Walaalaheyga qaaliga ahow al-baabada jihaadka waa la furay, Ragga geesiyaasha ahna waxay ku soo qulqulayaan fagaarayaasha Jihaadka xilli ciidamada cadowgana ay sii cararayaan midka midka ka dambeeya, marka walaalayaal kaaliya oo qaata kaalintii ku aadan cibaadadan Jihaadka, Imaada dhulka Jihaadka oo raadsada shahaada, sidoo kalena qaata booska aad janada ku leedihiin. Imaada oo ku soo biira Kolonyada Jihaadka si aan u soo celino Khilaafa ku ku taagan manhajka Nubuwada.
Waxaan leenahay cadowga Islaamka: Waxaad u dagaalmeysaan faafinta fasaadka, Dulmiga, iyo in aad faafisaan xumaan oo idil, halka anaguna aan u dagaalameyno faafinta Xaqqa, iyo Cadaaladda. Waxaan u dagaalameynaa Diinteena, dhulalkeena, iyo Sharafteena, ka dib markii walaaladeena la laayey, la jirdilay, Jeelalka laga buuxiyey, dhiigoodana si naxariis daro ah loo daadiyey. Ogaadana dagaalku waa wadaameysi, mararka qaar waan guuleysaneynaa oo gacanta sare ayaan heleynaa, Marna waad naga guuleysaneysaan.
Dagaalku ma ahan mid ku tiirsan tirada ciidanka ama cadadka Hubka toona balse waa dagaal ku tiirsan Caqiidada iyo Geesinimada. Ogaadana cabsida iyo walaaca idiin heysta wuu idiin xaqiiqoobayaa. Waxaad ka cabsaneysaan waa in dagaalku uu ku soo faafo magaalooyinka aad ku nooshihiin, Waxaanse idiin sheegayaa Allaah baan ku dhaartaye HOLACA dagaalku wuu isqabsaday , mana u kala soocna magaalo, Xuduud iyo waqti. Halka aan wax ku dhisaneyno ma ahan bilowga dagaalka ee waa dhamaadka dagaalka, qofka kasta oo markaas ku hara saaxada dagaalka ayaana ah guuleystaha dhabta ah, Allaahna wuxuu yiri: Ciribta dambe waxaa leh Mutaqadiinta.
Allaah Mahadii, Waxaan aragnay firxadka gaalada oo isaga cararaya Ciraaq iyo Afghanistan. Yemen waxay adeegsanayaan nidaamka ridada ah, Sidoo kalena wey joogi la’yihiin Mali, Soomaaliyana Markasta oo ay keenaan ciidamo dheeraad ah, waxaa ku sii kordhaya Musiibooyinka dushooda ku habsanaya. Kani waa kacdoon ay u wada Istaagtay Umadda Islaamka meelkasta oo ay joogaan. Umadeena waxay heystaa Rag dhimashada wadada Alle u jecel si la mid ah sida aad hantida iyo aduunyada u jeceshihiin oo kale.
Hoos Ka Daawo Kalimadda Yaasir.
بسم الله الرحمن الرحيم ماذا الله أقول المجاهدين كلهم اصبرو وصابر